Tena nitondra fanovana marina ho an’ny vahoaka ve ny fanavaozana tany Ozbekistan ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jolay 2020 5:42 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Français, Ελληνικά, українська, Nederlands, English
Tamin'ny faramparan'ny taona 2019, nisafidy ny fanjakana Azia Afovoany ao Ozbekistan ho “firenen'ny taona” noho ny firosoany tamin”ny fanavaozana ara-toekarena sy ny fanovana ara-politika ny gazety The Economist. Tsy isalasalana fa tsy misy ifandraisany amin'ny taona 2016 i Ozbekistan taona 2020, raha mbola teo ambany fitondran'ny filoha teo aloha Islam Karimov izay nanoka-monina ny firenena tamin'izany nandritra ny efa ho telopolo taona ary nanakana ny fanavaozana ara-politika sy ara-toekarena ary sosialy izay tena nilaina.
Nisy ny fiovana lehibe rehefa tonga teo amin'ny fahefana i Shavkat Mirziyoyev ary nahazo laza tsikelikely nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2017, herintaona taorian'ny nahalasa an'i Karimov. Mahavariana ny lisitr'ireo fanovana: ny fanavaozana ara-bola izay nahatonga ny vola tao an-toerana ho azo atakalo, ny vola, ny fisokafana tamin'ny fampiasam-bola avy any ivelany sy ny fizahantany manerantany, ny fampihenana ny fanivànana ny fampahalalam-baovao, ny fanafahana ny gadra politika sy ara-pivavahana sasany, ny ezaka hampitsaharana ny asa an-terivozona any amin'ny indostrian'ny landihazo, ny fisamborana ireo sangany teo aloha voarohirohy tamin'ny kolikoly, ny fidirana amin'ny Aterineto haingana sy mora kokoa .
Na izany aza, nanamarika ny lahatsoratra izay avy amin'ny The Economist ihany fa “mbola lavitra ny làlana ho alehan'i Ozbekistan ary mbola lavitra azy ny demokrasia”. Mbola misy tokoa ireo gadra politika any am-ponja, mbola tena sarotra ny manangana ONG, maro ny haino aman-jery vahiny sy ny ONG iraisam-pirenena no tsy mahazo misoratra anarana, mbola manjaka ny sivan'ny fampitam-baovao ary misy ny porofo mazava fa manelingelina ny maro amin'ireo fanavaozana ny kolikoly, ny fanararaotan'ny manampahefana ary ny tsindry amin'ny tontolon'ny fihariana, izay manakana ny fanovana lehibe ho an'ny olom-pirenena tsotra noho izany. Tamin'ny taona 2019, 235 $ Amerikana no salan-karama, raha 67 $ Amerikana ny karama farany ambany. Misy mpifindra monina aratoekarena Ozbek mihoatra ny 2 tapitrisa any Rosia.
10 ora izayAfrika Mainty